अब एकल पुरुषले पनि यसरी भत्ता पाउने, सही की गलत – Taja Khawar
अब एकल पुरुषले पनि यसरी भत्ता पाउने, सही की गलत
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १८, २०७८ समय: ०:४८:५८
September 2, 2021SanamLeave A CommentOn अब एकल पुरुषले पनि यसरी भत्ता पाउने, सही की गलत
दैलेख – एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकामा रहेका एकल पुरुषले पटकपटक भत्ता पाउने माग राखेपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यविधि निर्माण गरेर गाउँकार्यपालिकाले बजेट विनियोजन गरी एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।गाउँपालिकाभित्र रहेका ५५ वर्षमाथिका एकल पुरुषलाई मासिक रु. ५०० का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले ऐन निर्माण गरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने ५५ वर्षमाथिका एकल पुरुषलाई माघदेखि भत्ता दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए । भत्ता ६÷६ महिनामा वितरण गरिने उनले बताए ।त्यसैगरी विवाह नगरी बसेकी महिलालाई पनि भत्ता दिने निर्णय भएको अध्यक्ष मल्लले बताए । तर महिलाको उमेर हदबारे भने छलफल भइरहेको र एकल पुरुष र अविवाहित महिलाहरूको लगत सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
काठमाडौंमा शुक्रवार विदा
September 2, 2021 admin ebihaniसमाचार / समाजNo Commenton काठमाडौंमा भोली शुक्रवार विदा
१६ भदौ, काठमाडौँ । शुक्रबार (भोलि) काठमाडौंमा शोक विदा दिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१९ का अध्यक्ष शशीलाल श्रेष्ठको निधन भएपछि विदा दिइएको हो । क्यान्सरबाट पीडित ६५ वर्षीया श्रेष्ठको उपचारका क्रममा बिहीबार साँझ नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि उहाँलाई नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । उहाँले लामो समयदेखि क्यान्सरको उपचार गराउँदै आउनु भएको थियो । वि.सं. २०१३ साल पुस १४ गते जन्मिनु भएका श्रेष्ठलाई गएको डेढ महिनाअघि खाना नलीमा क्यान्सर देखिएको थियो । यसको उपचारका क्रममा उनलाई दोस्रो चरणको किमो दिइसकिएको थियो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार वडाध्यक्ष श्रेष्ठको निधनमा महानगरले भोलि १ दिन शोक विदा दिने भएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार वडाध्यक्ष श्रेष्ठको निधनमा महानगरले भोलि शुक्रबार एक१ दिन शोक विदा दिने भएको छ । उनको शव भोलि विहान ८ बजे अस्पतालबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि वडा कार्यालयमा लगिनेछ ।
वडाध्यक्ष पञ्चायतकालमा समेत वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको थियो । वडाध्यक्ष श्रेष्ठ वडा नम्बर १९ का स्थानीयमाझ निकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । स्वर्गिय वडाध्यक्ष श्रेष्ठको श्रीमती सानुमाया, एक छोरा, तीन छोरी र दुई जना भाईहरु छन् । ताजाखबर बाट
Last Updated on: September 3rd, 2021 at 12:48 am